Madasha Sawirrada iyo toddobaadkan
You are here: Home Home Madasha Sawirrada iyo toddobaadkan
Toddobaadkan Madasha Sawirrada waxa inoogu marti ah laba sawir oo aan ka soo qaatay Kal-fadhigii 2aad ee SNM ee ku qabsoomay magaalada Burco Meey 1991kii.
Golaha Dhexe ee SNM wuxu ka koobnaa 99 xubnood iyada la reebay 10 xubnood oo keyd ah oo loogu talo-galay hadba ciddii cusub ee ku soo biirta Ururka. Markii loo fadhiistay Kal-fadhigaa 2aad ee la go'aaminayay talooyinkii ka soo Shirweynihii Walaalaynta Beelaha Woqooyi ee ay ku samaysantay Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa la go'aansaday in la buuxiyo xubnahaa keydka ahaa ee Golaha Dhexe ee SNM. Waxa kale oo la go'aansaday in Golaha Dhexe ee SNM isla markaana si ku-meel-gaadh ah u noqdo Golaha Xeer-dejinta ee Somaliland inta xilkaa golihii gudan lahaa la samaynayo.
Aan sawirradan todoobaadka haddaba u soo noqdo:
Sawirka hore waa Jaamac Rabbiile Good oo taagan iyo General Yuusuf Tallan Cali oo fadhiya labadaba Ilaahay ha unaxariisto e'. Labadoodaba waxa loo magaacabay Xubno Golaha Dhexe ee SNM ah iyada oo uu Jaamac Rabbiile isla markaana noqday Wasiir, Yuusuf tallan Calina noqday Xubin Golaha Dhexe ee SNM iyo weliba xubin Guddida Fulinta ee SNM ah. Labadan mudaneba taariikh ayay ku lahaayeen SNM. Jaamac Rabbiile Good oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururkii SSDF, waxa kale oo uu mar ku soo biiray SNM isaga oo kaga jiray kaalin hoggaamineed. General Yuusuf Tallan Cali wuxu ka mid ahaa saraakiishii dawladda Siyaad Barre ee SNM ugu soo gashay magaalada Berbera. Dadkii reer Berbera waxa ay ka marag-fureen in General Yuusuf Tallan iyo saraakiil kaleba ka mid ahaayeen intii dadku ka badbaaday.Ssaraakiisha kale waxa ka mid ahaa Dhuumaal iyo Kediye oo iyagana la sii daayay oo weliba la sii ambo-bixiyay.
Sawirka labaadna waa Maxamed Cali Caateeye iyo Odey Shiine oo labadaba loo magacaabay xubin Golaha Dhexe ee SNM. Maxamed Cali Caateeye wuxu ka mid ahaa ergadii Garaad Cabdilqani ee nagu soo booqatay Xaruntii SNM ee Balli-gubadle dabayaaqadii 1990kii. Maxamed Cali Caateeye in badan ayuu wasiir ka soo noqday dawladihii kala danbeeyay ee Somaliland, haddana wuxu deggan yahay dalka Ingiriiska. Odey Shiine waxa igu maqaalo ah in uu Maraykanka deggen yahay.
Halkan ka daalaco